Dhallinyaro Soomaaliyeed Oo Ka Baxsatay Xabsiyo Ku Yaalla Liibiya – Bandhiga
Dhallinyaro Soomaaliyeed Oo Ka Baxsatay Xabsiyo Ku Yaalla Liibiya
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku jiray xabsiyada magaalada Tripoli ee dalka Libiya ayaa baxsaday kadib markii kooxo hubeysan oo ku loolamaya gacan ku heynta Tripoli ay ku dagaalameen magaaladaasi gaar ahaan xabsiyada ay ku jireen dhalinyaradan.
Danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya u qaabilsan Midowga Yurub, Cali Saciid Faqi ayaa sheegay in dhalinyaraddan Soomaaliyeed ee ka baxsaday xabsiyadda Tripoli qarkood ay yimadeen xarunta safaaradda islamarkana ay wadan qorshe lagu baadi goobayo dhalinyaradda kale ee ka baxsatay xabsiyada.
“Waxaa dhammaan waalidiinta dhalinyarada ku xiran xabsiyada Libya la ogeysiinaya in saaka dagaal culus uu ka dhacay magaalada Tripoli, dhowr xabsi oo Soomalida ku sugneed ayaa iridaha loo balaqey,
waxaa safaaradda hadda ka shaqeenaysa in dhalinyarada meel la isugu keeno, xabsiga Tariqu Mataar iyo Salaxu Diin dhalinyaradii ku jirtey way kala carareen. Qaar baa hadda safaaradda yimid” ayuu yiri danjire Cali saciid.
Cali Faqi ayaa sheegay in ay jiraan dhalinyaro kale oo weli ku jira xabsiga Ain Zara, oo ku yaalla magaalada Tripoli, caasimadda Libya.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey dhalinyarro Soomaaliyeed oo tariibayaal ah ka soo celisay dalka Libya kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan u geysteen maleeshiyaadka hubeysan ee maamula xabsiyada.